Hamro Kantipur | जसपा सरकारमा किन सहभागी भएन ? जसपा सरकारमा किन सहभागी भएन ?
जसपा सरकारमा किन सहभागी भएन ?
पार्टी दुई समूहमा विभाजित भएपछि आधिकारिकताको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा चलिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई आयोगमा बोलाएर सहमतिका लागि छलफल गराए पनि दुवै समूहले छुट्टाछुट्टै रहने बताएका थिए । छुट्टाछुट्टै रहने बताएपछि आयोगमा अहिले पार्टी आधिकारिकताको विषयमा बहस जारी रहेको छ ।राजधानी दैनिकबाट